Badan - fitsangatsanganana sy fikarakarana
Badan dia zavamaniry miteraka, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isan-karazany (karazana matevina). Mamboly azy io amin'ny ankapobeny, fa ny fakan-kazo sy ny ravin'oliva dia tena ilaina amin'ny fitsaboana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny fomba famolavolana biana sy ny fitsipika fototra momba ny fikarakarana azy.
Mamboly tsara an'io zavamaniry io amin'ny lohataona, ary raha tsy nisy fotoana dia azonao atao izany amin'ny volana aogositra. Voalohany aloha dia ilaina ny miomana eo ambanin'ny tany bahan - mba hanadio azy araka izay azo atao amin'ny tsimparifary ary hamerina indray ny fananganana sy ny asidra. Badan dia tia tavoahangy maitso maitso, tsy mitongilana na malemy paika, tsy misy ny mety hitrangan'ny tsy fahampian-tsakafo.
Zava-dehibe ihany koa ary ny toerana hanamboarana solika. Ny toeram-pambolena dia mankafy toerana misy lalaon'ny masoandro amin'ny maraina na hariva. Ny tranonkala misy ala main'ny hafanana dia ratsy amin'ny badana satria mila manara-maso ny hafanana amin'ny tany foana izy, satria tsy afaka mandroaka ny zavamaniry.
Mamboly kôkôniôma any anaty lavaka lehibe, nefa tsy misy (30 cm), ary ny antsasany fotsiny no lany. Etsy andaniny, tokony hiezaka ny tsy handika sy tsy hamahana ny kihom-po, hanome fahafahana azy. Avy any ambony ambonin'ilay tranobe dia tsy maintsy rakofana siramamy na sehatra.
Fikarakarana ny fararano amin'ny fararano
Amin'ny ankapobeny dia tsy sarotra ny mikarakara ny bahany, ary koa ny fandehanana any. Ny zavamaniry dia tsy dia mendri-piderana loatra ary mitaky rano tsy ara-potoana. Aorian'ny faran'ny vanim-potoana voninkazo dia azo sakafon-tsolika miaraka amin'ny zezika. Ny fampakaram-bady matetika matetika dia tsy misy ilàna azy, indrindra fa avy amin'ity voninkazo ity.
Ny ririnina dia tsy mila mitandrina manokana. Tsy mitaky fialofana izy io, satria ny ririnina no tena mampiavaka ny ririnina, ary mbola mitazona ny raviny eo ambanin'ny lanezy, toy ny orin-dranomasina mandrakizay.
Ny fiarovana sy ny fialofana amin'ny ririnina dia zana-ketsa kely kely ihany avy amin'ny voa. Izy ireo dia mafana amin'ny ravina maina, izay nesorina tamin'ny lohataona.
Rehefa ririnina, dia nesorina ireo ravina voasesika sy rotsakorana, ary ny tanora dia ampiasaina handefa dite. Ny fipoahana dia miseho tsy ela taorian'ilay fiantsonan'ny lanezy eo ambanin'ny rosettes voasesika. Mitombo sy mivelatra ny zana-ketsa mandra-pahatongan'ny fiandohana na amin'ny faran'ny fahavaratra. Aorian'izany dia manana fotoam-pialan-tsasatra izy ireo, ary amin'ny fararano dia mety hipoitra tampoka faharoa ny voninkazo.
Ny basy dia tsy mitaky fiterahana matetika, dia mitombo amin'ny toerana iray mandritra ny 7-10 taona na mihoatra. Manamboatra ilay tranonkala amin'ny endriny ivelany izy ireo, ankoatra ny mahasoa azy ireo amin'ny fitsaboana aretina, ny oncologie sy ny olana amin'ny fitomboan'ny tsindry.
Fiompiana lohataona manopy maitso
Famokarana hazo fihinam-boa
Karoty - fambolena sy fiahiana eny an-kalamanjana
Plum "Hungarian Moscow" - famaritana
Ahoana no hambolena hyacinth ao anaty vilany?
Ahoana no hanomanana fandriana ho an'ny tongolo lay amin'ny alàlan'ny fianjerany?
Raspberry - aretina sy bibikely
Fuchsia: fikarakarana ny ririnina
Voangom-bokatra eny amin'ny lohataona - inona no hatao manaraka?
Amin'ny herintaona inona ny aprikosa no mamoa?
Eschsolcia - mitombo avy amin'ny voa ary mikarakara orinasa
Karazam-bolo amin'ny ririnina
Ahoana ny fametrahana lay amin'ny ririnina?
Naman'ny Ember Hurd momba ny fahalalahan-tanan'i Johnny Depp
Eo amin'ny fasan'ny biriky
Vehivavy testosterone ambany amin'ny vehivavy
Ahoana raha lehibe ny kiraro?
Famaranana trano fonenana
Kiroboka ao amin'ny jibony manokana ho an'ny ririnina - ny fomba tsara indrindra ho an'ny fanangonam-bokatra mahafinaritra
Ny atody atody ao anaty barika maromaro
Ahoana no ahafahako manangana ny lavitra ho an'ny fahitalavitra?
Nanaiky i Paris Jackson fa mandeha mitanjaka ao an-trano izy!
Booster ho an'ny ankizy
Ahoana no hampitomboana ilay boriky?
Vita ny balkon ao anatiny
Espumizan ho an'ny zaza vao teraka - fitsipika manan-danja hampiasaina
Recipe amin'ny siramamy vita amin'ny oven
Ahoana ny fomba fametahana ny sisin-drakitra amin'ny sisiny eo amin'ny zorony?
Mofo vita amin'ny hoditra voajanahary
Loko volomparasy mena